सुदूरपश्चिममा एकै दिन आठ सङ्क्रमितको मृत्यु, अक्सिजन अभाव - हाम्रो देश
सुदूरपश्चिममा एकै दिन आठ सङ्क्रमितको मृत्यु, अक्सिजन अभाव
धनगढी, वैशाख १६ गते । कोरोनाले डरलाग्दो रुप लिइरहेको सुदूरपश्चिममा बिहीबारमात्रै आठ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । कैलालीका पाँच र कञ्चनपुरका तीन गरी आठ जनाको ज्यान गएको हो । योसंगै कोरोना सङ्क्रमणका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७४ पुगेको छ । कैलालीका चार जनाको उपचारको क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पताल र एक जनाको होम आइसोलेसनमा ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गोदावरी नगरपालिका पूर्वी रोडका ८७ वर्षीया सङ्क्रमित महिलाको होम आइसोलेसनमा ज्यान गएको छ ।
यसैगरी, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का ४५ वर्षीया महिलाको ज्यान गएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलिपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कोरोना पुष्टि भएको १२ घण्टामै ती महिलाको ज्यान गएको उहाँले जनाउनुभयो । यस्तै, आइसीयुमा उपचारको क्रममा लम्कीचुहा नगरपालिका–२ का ३३ वर्षीय पुरुष र घोडाघोडी नगरपालिका–१० का ६० वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका–१२ का २८ वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको दिउँसो मृत्यु भएको छ ।
यसैगरी, कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहीबार तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अस्पतालका कोभिड स्रोत व्यक्ति डा. गोविन्द रोकायाका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका–१९ का २१ वर्षीय युवकको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ । ब्लड क्यान्सरसंग जुधिरहेका ती युवकलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । आइसीयुमा राखेर उपचार गर्ने क्रममा उहाँको ज्यान गएको डा. रोकायाले बताउनुभयो ।
यस्तै, भारतबाट सङ्क्रमित भएर फर्किनु भएका दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का ३० वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ । गड्डाचौकीमा एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा ती पुरुषलाई सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । ती पुरुष होमआइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि दुई दिन अगाडिमात्रै अस्पताल भर्ना भएकोमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो ।
यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिका–१८ का ३६ वर्षीया एक महिलाको पनि मृत्यु भएको छ । स्थानीय सङ्क्रमण भएपछि ती महिलालाई वैशाख ११ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । दोस्रो लहरको कोरोनाले निमोनिया छिट्टै बढाउने गरेको र चाँडै मान्छेको ज्यान लिइरहेको डा. रोकायाले बताउनुभयो ।
यसैबीच, महाकाली अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएको छ । दैनिक १५ वटा सिलिण्डरसम्म अक्सिजन खर्च भइरहेको छ । आइसीयु र भेन्टिलेटरमा एक सिलिण्डर एक घण्टासम्ममात्रै पुग्ने गरेको जनाइएको छ । ‘बेलैमा पर्याप्त अक्सिजन आएन भने धेरै कठीन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दछ’, डा. रोकायाले भन्नुभयो । ‘अहिले आएको अक्सिजन बाहिर कसैलाई नदिने गरे पनि हामीलाई पुगिरहेको छैन । सरकारले अक्सिजन आपूर्तिमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’